पुन: प्रयोग अभियान, यसलाई कसरी सफल बनाउनको लागि एक व्यवस्थित गर्ने? | हरियो नवीकरणीय
रिसाइक्लि campaign अभियान
हामी सबै एक संगठित गर्न सक्नुहुन्छ रिसाइक्लि campaign अभियान हाम्रो शहरमा, यो सामान्य छ किनकि त्यहाँ उत्पन्न गरिएको सबै फोहोरको अलग गर्ने, स collection्कलन गर्ने र रिसाइक्लि for गर्ने कार्यक्रमहरू छैनन्।
यसैले स्कूल, एक एनजीओ, एक क्लब, कम्पनीहरु र अन्य संस्थाहरु लाई रिसाइक्लि campaigns अभियानहरु संगठित गर्न सक्छ कि लाई प्रोत्साहन गर्छ सबै प्रकारको फोहोर पुनर्चक्रण। यदि तपाईं एक संगठित गर्न चाहानुहुन्छ भने, यहाँ निर्देशनहरू अनुसरण गर्न छन्।
1 सफल रिसाइक्लि campaign अभियानको लागि सुझावहरू
1.1 हामी स्कूलमा कसरी पुन: प्रयोग अभियान चलाउन सक्छौं?
2 कसरी मानिसहरूलाई रिसाइकल गर्न प्रेरित गर्ने?
2.1 कुन क्षेत्रहरु सामाजिक अभियानहरु जस्तै रीसाइक्लिंग लाई बढावा दिन्छन्?
3 यसलाई कसरी पुन: साइकल गर्नुपर्दछ?
4 फोहोर रिसाइक्लि improve सुधार गर्न हामी के गर्न सक्दछौं?
5 फोहोर संकलन अभियान कसरी बनाउने?
सफल रिसाइक्लि campaign अभियानको लागि सुझावहरू
एक पुनर्चक्रण अभियान सफल हुन को लागीकेही दिशानिर्देशहरू खातामा लिनुपर्दछ जस्तै:
रिसाइक्लि campaigns अभियानहरूको सेट सुरु र अन्त समय हुन्छ, यदि तिनीहरू कार्यक्रमहरूमा रूपान्तरण गरिएका छैनन्। त्यहाँ सुरु मिति र अन्त्य मिति छ।
राम्रो संचार अभियानको योजना गरिएको क्षेत्रमा, सबै प्रकारका मिडिया प्रयोग गर्नुपर्दछ, जस्तै पोस्टरहरू, विज्ञापन, सामाजिक नेटवर्कहरू, ढोका ढोकाहरू लगायत।
अभियान फैलाउँदा स्पष्ट जानकारी दिनुहोस् ताकि सबैले सन्देशलाई बुझ्दछन् र यो कसरी गरिन्छ भनेर बुझिन्छ।
अभियान सुरू गर्नु अघि, तपाईंले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ कि फोहोर वा स materials्कलन गरिएका सामग्रीहरू के हुन्छ।
यसलाई साँचो सफल बनाउन सबै सामाजिक र सामुदायिक क्षेत्रहरू समावेश गर्नुहोस्।
नागरिकहरूलाई विकल्प र सहभागिताका फारमहरू दिनुहोस् ताकि अधिक व्यक्तिहरू सहयोगी हुन सक्दछन्।
जब अभियान समाप्त हुन्छ, परिणामहरू विभिन्न मिडियामा रिपोर्ट गरिनुपर्दछ जसले भाग लिनेहरूले थाहा पाउँदछ कि यो कसरी अन्त्य भयो र के प्राप्त भयो।
रिसाइक्लि campaigns अभियानहरू दोहोर्याउन सकिन्छ तर यो रचनात्मक हुन र फरक तरिकाले कुराकानी गर्न सुविधाजनक छ।
पुन: साइकलिंग अभियान स्थानीय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय पनि हुन सक्छ। तिनीहरूले धेरै मात्रामा उत्पादनहरू वा सामग्रीहरूमा फोकस गर्न सक्छन् जुन बेकार छ तर तिनीहरूको उत्पादनको रूपमा डिस्पोजेसन हुँदैन संदूषण संसाधनहरू खेर फाल्ने बाहेक।
रिसाइक्लि फोहोर व्यवस्थापन गर्ने मुख्य तरिका हुनुपर्दछ, प्रत्येक शहरमा, शहर र देश रिसाइक्लि .को प्रचार गर्नु पर्छ। यस तरिकाले तपाईं सुरक्षा गर्दै हुनुहुन्छ वातावरण.
राम्रो रिसाइक्लि campaign अभियान जागरूकता बढाउनु पर्छ र पुनर्चक्रण को आवश्यकता को बारे मा सूचित गर्नु पर्छ र कसरी गर्ने भन्ने बारे जानकारी दिनुहोस्।
के तपाईंले कहिल्यै पुन: साइकल अभियानको आयोजना गर्नुभयो? यसलाई व्यवस्थित गर्न तपाईंले के कदम चाल्नुभयो?
पूर्ण हुनको लागि, रिसाइक्लिंग बिनमा रंगहरूको अर्थ बुझाउन नबिर्सनुहोस्:
रिसाइक्लिंग डिब्बे, रंग र अर्थ
हामी स्कूलमा कसरी पुन: प्रयोग अभियान चलाउन सक्छौं?
सानै उमेरदेखि नै रिसाइक्लि Encलाई प्रोत्साहित गर्नु सामान्यतया उत्तम विकल्प हुन्छ जसले उनीहरूको दैनिक जीवनमा यी बानीहरू परिचय गराउँदछ। यदि हामी केटाकेटीलाई सानै उमेरदेखि नै रीसायकल गर्न सिकाउँछौं, हामी भविष्यमा स्वचालित रूपमा यसलाई गर्न जारी राख्छौं। आउनुहोस् हामी कुञ्जीहरू के गर्दछौं ताकि स्कूलमा रिसाइक्लि campaign अभियान राम्रोसँग काम गर्न सक्दछ:
3Rs र तिनीहरूको महत्व सिकाउनुहोस्
कक्षा कोठा रिसाइक्लि system प्रणालीको साथ सुरू गर्नुहोस्
शिल्पमा प्रयोग हुने सबै सामग्रीहरू भण्डारण गर्न कन्टेनरहरू सिकाउनुहोस् र नियुक्त गर्नुहोस्
सबै वस्तुहरू पुन: प्रयोग गर्नुहोस् जुन कहिँ पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ
गतिविधिहरू गर्नुहोस् ताकि बच्चाहरूले पुन: प्रयोग वस्तुहरू प्रयोग गर्न सक्दछन्
पुनर्चक्रण सामग्री पछि आफ्नो हात धुने को महत्त्व बताउनुहोस्
स्थानीय रिसाइक्लि plants बिरूवाहरूको निर्देशित भ्रमणहरू आयोजना गर्नुहोस्
कसरी मानिसहरूलाई रिसाइकल गर्न प्रेरित गर्ने?
मानिसहरूलाई रीसायकल गर्न प्रोत्साहित गर्न, तपाईंले केही प्रकारको पुरस्कारको साथ प्रोत्साहन दिनुपर्दछ। कागज वा प्याकेजि using प्रयोग नगरेको संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्न तपाईं एक डोनेशन अभियान सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। प्रभावी रूपमा फोहोरलाई छुट्ट्याउनको लागि यसका लागि पर्याप्त रिसाइक्लिंग बिन हुनु महत्त्वपूर्ण छ।
तपाइँ खेलौना, कपडा र पुस्तकहरू दिन सक्नुहुन्छ जुन तपाइँको सेवा गर्दैन ताकि अरू कोहीले फेरि प्रयोग गर्न सक्दछ। सबै भन्दा राम्रो चीज भनेको यी सबै कार्यहरू सञ्चार गर्नु हो र दिनहुँको आधारमा गतिविधिहरूको वातावरणीय प्रभावलाई कम गर्न केही प्रकारको उद्देश्यसम्म पुग्न प्रेरित गर्नु हो।
कुन क्षेत्रहरु सामाजिक अभियानहरु जस्तै रीसाइक्लिंग लाई बढावा दिन्छन्?
धेरै मानिसहरु लाई रिसायकल गर्न को लागी यो सधैं गैर सरकारी संगठनहरु, शैक्षिक केन्द्रहरु, वा यहाँ सम्म कि खेल केन्द्रहरु संग सम्पर्क मा प्राप्त गर्न को लागी रोचक छ कुन क्षेत्रहरु छन् कि तपाइँ सबैभन्दा धेरै मद्दत प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ, सम्भवतः तपाइँ एक कोठा संगै सम्मेलनहरु प्रदान गर्न र यस प्रकार मानिसहरु को बीच जागरूकता बढाउन, वा पोस्टर लगाएर, उदाहरण को लागी।
यसलाई कसरी पुन: साइकल गर्नुपर्दछ?
सही रीसायकल गर्न फोहोर, यसको प्रकार र कहाँ राख्नुपर्दछ भनेर राम्ररी जान्नु महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो घरहरूमा दैनिक आधारमा सबैभन्दा बढी उत्पन्न हुने फोहोर प्याकेजि,, प्लास्टिक, कागज, गत्ता र गिलास हो। ती सबैलाई जैविक फोहोरबाट अलग गर्नुपर्नेछ र तिनीहरूको सम्बन्धित कन्टेनरहरूमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।
त्यस पछि हामीले थाहा पाउनु पर्दछ कि खतरनाक वा विषाक्त फोहोर के हो र कहाँ जम्मा गर्ने। यसका लागि, त्यहाँ निर्दिष्ट कन्टेनरहरू छन्, ब्याट्रीहरूका लागि, प्रयोग गरिएको तेल र शहरहरूमा सफा पोइन्टहरू।
फोहोर रिसाइक्लि improve सुधार गर्न हामी के गर्न सक्दछौं?
फोहरको रिसाइक्लि improve सुधार गर्न, महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको राम्रो प्रशिक्षण दिनु र फरक जान्नु हो कन्टेनर को प्रकारहरु त्यो अवस्थित छ। हामी पनि गर्न सक्छौं फोहर प्रणाली सुधार गर्न स्थानीय काउन्सिलहरुलाई सोध्नुहोस्, समान बयान र संग्रह को सुविधाजनक। सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको दक्षता र कच्चा मालको प्रयोग सुधार गर्न खपत कम गर्नु हो।
फोहोर संकलन अभियान कसरी बनाउने?
अनुसरण गर्न को लागी कदमहरु कम वा कम एक जस्तै हुनेछ यदि हामी एक पुनर्चक्रण एक बनाउन चाहन्छौं; त्यो हो, हामीले उपयुक्त कन्टेनर राख्नु पर्छ र व्याख्या गर्नु पर्छ कि प्रत्येक फोहोर कहाँ जान्छ। अरु के छ त, यो जागरूकता बढाउन महत्त्वपूर्ण छ, या त भिडियोहरु र / वा प्रदूषण को ग्रह मा अवस्थित छ कि छविहरु देखाएर, र प्रभावहरु यो प्रकृति र आफै मा कारण बनाउँछ।
यो विशेष गरी बालबालिका वा स्कूलहरु मा शुरू गर्न को लागी रोचक छयो ज्ञात छ कि जब बच्चाहरु एक युवा उमेर बाट वातावरण को ख्याल राख्न जान्छन्, उनीहरु वयस्क को रूप मा यसो गर्न जारी राख्न को लागी अधिक संभावना छ।
बिस्तारै बिस्तारै, प्रत्येक एक बालुवा को आफ्नो अन्न राखी, हामी एक सफा पृथ्वी पाउन सक्षम हुनेछौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: हरियो नवीकरणीय » ऊर्जा बचत » हरियो घर » रिसाइक्लि campaign अभियान
धन्यबाद एड्रियाना, यो समाचार एकदम राम्रो छ, यो यो हो कि म गुगलमा यस शीर्षकको लागि खोजी गर्दछु किनकि म कोस्टा रिकान मानिसहरू (मेरो देश) लाई त्यसो गर्नका लागि सचेत हुन चाहन्छु, र यदि तपाईं चाहानुहुन्छ भने, "रियो विरोला कोस्टा रिका" को खोजी गर्नुहोस्। ", र ती दुर्गन्धित नदाहरूमा फालिएको फोहोरको बारेमा अप्रिय समाचारहरू बाहिर आउनेछन्।
मलाई वास्तवमै यसले के भन्छ भनेर मन पर्छ किनभने हामी रिसेट गर्न सक्दछौं
गेब्रियल कास्टिल्लो भन्यो
सुपर! यो काम गर्ने कम्पनीमा अभियान योजनाको लागि आधारको रूपमा काम गर्‍यो।
गेब्रियल कास्टिल्लोलाई जवाफ दिनुहोस्
वातावरणीय स्रोत कसरी बढाउने?
Andrea yulieth गोप्य युद्ध भन्यो
यस जानकारीले मलाई धेरै धन्यवाद एड्रियनलाई मद्दत गर्‍यो
Andrea yulieth lopez गोप्य युद्दको जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार, म मेरो कामबाट फोहोर पुन: प्रयोग गर्नका लागि समर्थन र जानकारी प्राप्त गर्न चाहन्छु। हामी धेरै प्लास्टिक प्रयोग गर्छौं र म ग्रहलाई अलिकता पनि मद्दत गर्न चाहन्छु।
नमस्कार शुभ दिन; हाम्रो छिमेकमा, हामी हरियो पोइन्टको साथ फोहर छुट्याउने योजना गर्दैछौं।
हामीद्वारा निर्मित, तिनीहरू एकै ठाउँमा राखिनेछ, (१ bags ब्यागको ब्याट्री) हामी कम्पनीसँग सहमत छौं कि फोहोर हटाउनेछौं, हामी एक नियन्त्रण क्यामेरा राख्छौं र यो अनुचित तरिकाले गर्ने कामलाई सच्याउँछौं।
सल्लाह, हामी कस्तो किसिमको जानकारी छिमेकीमा प्रदान गर्नुपर्दछ, ताकि उसलाई थाहा हुन्छ कि फोहोर कहाँ राख्ने आदि।
तपाईको समयको लागि धेरै धेरै धन्यबाद।
रोबेटोलाई जवाफ दिनुहोस्